Taariikh Nololeedka Ra’isul Wasaarihii Soomaaliya, Nuur Cadde – Somali Top News
April 12, 2020 April 12, 2020 Somali Top News	0 Comments
Nuur Xasan Xuseen, Nuur –Cadde, wuxuu ahaa nin muddo ka badan nus qarni u shaqeeyay Dowladda Soomaaliya, jagooyinka dalka ugu sarreeyana ka gaaray.
Wuxuu muddo dheer ka tirsanaa booliiska Soomaaliya. Wuxuu ka qabtay xilal kala duwan.
Darajo wuxuu ka gaaray Gaashaanle Sare.
Iyada oo sida aan maqlay ay soo jeedintiisa gacan weyn ku leeyihiin saaxiibbadiisii Bisha Cas, Dr. Food – Cadde iyo General Cabdinuur Yusuf, ayaa Madaxweyne Cabdullaahi Yusuf uu Ra’iisal Wasaare u magacaabay Nuur Xasan Xuseen, Nuur – Cadde.
Waa sida beri dambe ka dhex dhici doonta Madaxweyne Xasan Shiikh iyo Ra’iisal Wasaare Cabdiweli Shi
Nuur-Cadde taageero kama haysan muqaawamada soo buuxisay Baarlamaanka, sidoo kale taageere kama haysan taageerayaasha Cabdullaahi Yusuf ee Baarlamaanka hore u fadhiyay. Sidaa darteed, waxaa doorashada ku guuleystay Shariif Shiikh Axmed oo loo doortay Madaxweyne. Iyada oo murashaxa ku soo xigaana uu noqday General Maslax Maxamed Siyaad.
W/Q: Yuusuf Garaad Cumar. Wasiirkii hore ee arrimaha dibedda Soomaaliya iyo madaxii hore ee BBC Somali.
← State minister dies from coronavirus in Somalia one day after testing positive
Xildhibaan katirsan Hirshabelle oo Coronovirus ugu geeriyooday Muqdisho →